VaSikhala Voda Kuripwa Mamiriyoni Matatu eMadhora neKusungwa Kwavakaitwa
Kukadzi 23, 2020
Mutewedzeri wasachigaro weMDC, uye vari mumiriri weZengeza West muparamende, VaJob Sikhala.
Mutewedzeri wasachigaro vebato reMDC, VaJob Sikhala, vanoti vakakwanisa kusvitsa masamanisi kudare repamusoro ekuti varipwe mari inosvika mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica mushure mekusungwa kwavo gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa pachigaro.
VaSikhala, avo vakazowanikwa nedare repamusoro kuMasvingo vasina mhosva, vanoti vakwirira kumatare gurukota rezvemukati menyika, Vakazembe Kazembe, mukuru wemapurisa Commissioner-General Godwin Matanga, pamwe nemupurisa wekudivi reLaw and Order muHarare avanoti akavashungurudza zvikuru pavaive muhusungwa, Superintendent Daniel Joseph.
VaSikhala, vanove zvakare mumiriri weZengeza West muparamende, vakatanga danho rekukwira kumatare iri gore rapera muna Nyamavhuvhu vachikwirira mapurisa pamwe naVaCain Mathema vaive gurukota rezvemukati menyika panguva iyi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuvatatu ava kana vati vatambira masamanisi aya.